Famaritana talantalana elektronika - ny zava-bita lehibe indrindra amin'ny faharanitan-tsaina sy ny nomerika amin'ny fivarotana antsinjarany vaovao
(1) Manatsara ny fahombiazan'ny orinasa ary mitsitsy fotoana sy vidiny. Manamora ny marika taratasy nentin-drazana amin'ny alàlan'ny fampiharana an-tanana, fanitsiana ny vidiny, fanonta ary avy eo alohan'ilay talantalana mba hanoloana ny marika ireo fizotran'asa sarotra ireo, hamonjy ny vidin'ny asa sy ny vidin'ny fotoana, hanatsara ...
Ny fitomboana haingana amin'ny toekarena mpivarotra dia miteraka karazan-tsakafo marobe, mitombo ihany koa ny fampiharana ny rafitra anti-steal anti-supermarket, ary mitombo koa ny sandan'ny tsena malaky anti-halatra mifandraika amin'izany. Voalaza mialoha fa ho lasa indostria ny labels de la protection anti-steal ...
Mba mahatsapa vidim-malalaka isoratana ny fepetra arahana ary hamaly anao Ho ASAP.
Mba mahatsapa vidim-malalaka isoratana ny fepetra arahana ary hamaly anao Ho ASAP. Izahay efa nahazo ekipa matihanina injeniera mba hiasa mandritra ny tsirairay ilaina antsipirihany. Free santionany azo nalefa ho anao manokana ny hahalala lavitra zava-misy. Mba afaka hihaona ny faniriana, azafady rea ...
Channel-tag, miaraka amina an'izao tontolo izao!
Amin'ity vanim-potoana manokana ity raha miady amin'ny areti-mifindra ity tontolo ity, dia hanao ny anjarantsika ny hafaliana ho an'izao tontolo izao koa izahay Channel-tag, satria iray amin'ireo mpamatsy marika elektronika miady amin'ny halatra. Miaraka amin'ny fihetsika matotra sy tompon'andraikitra amin'ny baiko tsirairay, tsy hanemotra ny fandefasana baiko izany isika….
Fampandrosoana amin'ny rafitra elektronika anti-halatra
Ny rafitra EAS dia rafitra fitaovana elektronika miady amin'ny elektronika avo lenta, izay afaka miaro amin'ny fomba mahomby sy manakana ny fangalarana entana. Ny EAS dia misy ampahany lehibe telo: Sensor, Deactivator, ary Tag Electronic. Ny marika elektronika dia zaraina ho marika malefaka sy marika mafy. Ny fampandrosoana ny EAS any Chine, ...
Fomba fisafidianana ny varavaran'ny fiarovana trano lehibe
Ankehitriny, karazana fampakaram-baravarankely rehetra izay ampiasain'ny mpivarotra fitafiana, be dia be ny karazan-javam-baravarana, koa tokony hitandrina isika hisafidy vokatra azo antoka sy azo antoka. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny fanairana eo am-baravarana eo am-baravarankely dia apetraka AM alarm, satria ny fanairana RF dia mbola ...